Accueil > Gazetin'ny nosy > Akom-baovao samihafa : Delestazy, Mitohy foana ny laingan’ny Jirama
Akom-baovao samihafa : Delestazy, Mitohy foana ny laingan’ny Jirama
Noho ny fahatapahan’ny lalam-pirenena faharoa, nandritra ny orambe nikija ny alahady sy ny alatsinainy lasa teo, dia nisy fahatarana ny famatsiana solika ny toby famokarana herinaratra ny Jirama ka vao maika manamafy ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Lasa avo roa na avo telo heny mihintsy ny faharatenan’ny delesatazy, nanomboka ny alatisinainy lasa teo. Ny zava-misy anefa dia mbola mitohy foana ny lainga sy ny fitaka ataon’ny orinasa JIRAMA amin’ireo mpanjifany satria tsy araka ny fampilazàna mivoaka any anaty tambazotran-tserasera sôsialy ny tena zava-misy. Raha milaza ohatra ny filazan’ny Jirama fa amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 11 ora maraina no tapaka ny jiro amin’ny faritra iray, dia tsy izany mihintsy ny zavatra hitranga ao amin’ilay faritra fa raha tapaka amin’ny 8 ora maraina dia mety amin’ny 4 ora hariva vao miverina ny herinaratra. Fitaka sy lainga foana no afafin’ny Jirama izay vao maika mahasorena ny mpanjifa, indrindra fa ireo manana asa fivelomana izay miankina amin’ny herinaratra.
Sambo Francia rendrika : Tsy mbola hita ilay tompon-tsambo
Ny 21 desambra tamin’ny taon-dasa teo no nitrangan’ilay lozan-dranomasina niseho tany amin’ny distrikan’i Soanierana Ivongo izay namoizana ain’olona miisa 83. Tsiahivina ihany fa anisan’ireo avotra tamin’ity loza ity ny mpamilin’ilay sambo izay tompony ihany. Nokarohana fatratra moa io tompon’ny sambo Françia io ary namoahana didy fikarohana (avis de recherche) satria mila hanaovana fanadihadiana mba hamantarana ny zava-nitranga marina tamin’io loza mahatsiravina io. Iray volana mahery aty aoriana, tsy mbola hita ny tompon’ilay sambo fa mbola karohan’ny mpitandro filaminana foana.
Lalam-pirenena RN2 : Efa nitohy omaly hariva.
Araka ny ezaka nataon’ny ministeran’ny asa vaventy dia voapetraka ny tetezamby vonjimaika (pont beiley) ka nisokatra omaly talata tamin’ny dimy ora ny lalana tapaka teo Moromanga. Eo andalam-panombohana ny asa fametrahana ny tetezana maharitra ny ministera, ary efa any an-toerana ny fitaovana araka ny vaovao nampitana.